Indeksa fanasitranana fantsom-bozaka, fantsom-panafody, fanasitranana vy
Home / Applications / Induction Annealing / Fanamafisana ny induction
Sokajy: Induction Annealing Tags: annealing, fampitaovana varahina manitra, fantsona varahina manenona, fampidiran-drano, fomba famonoana, varahina varahina manenona, fanasitranana avo dia avo, induction aegaling, varahina manenona varahina, fanasitranana fanasitranana
Ity dingana ity dia manasitrana metaly izay efa niasa be dia be. Induction fanasitranana mampihena ny fahasamihafana, manatsara ny fandrenesana ary manamaivana ny adin-tsaina anatiny. Ny fanasitranana tanteraka ny vatany dia dingana izay anaovana ny tsangambato feno. Miaraka amin'ny famokarana ny holatra (fantatra kokoa amin'ny anarana mahazatra), ny hany voakasika amin'ny hafanana vokarin'ny fizotran'ny firaka dia ny fitsaboana.
mitarika varahina manenitra
Fampidinana fanasitranana sy fanaraha-maso Manolotra hafanana haingana, azo antoka ary azo tanterahina, ny fifehezana ny mari-pana, ary ny fifandraisana mora foana. Ny induction dia mitahiry ny singa tsirairay ho an'ny mari-pamantarana, miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso manara-maso sy manoratra ny dingana manontolo.
Ny fanasitranana fampidinana sy ny fampitomboana dia ampiasaina be dia be ao amin'ny orinasa mpamokatra ravin-tsoavaly. Manala ny tady, ny bozaka vy, ny lelatra antsy ary ny rongony varahina. Raha ny marina, ny fampidirana dia tena tsara ho an'ny tetikasa fanalana hafanana.
Ny mety ho an'ny Fitaovana fampidirana fanasitranana anisan'izany DW-MF, DW-HF sy DW-UHF induction heater.
Fanamafisana ny mpanafaka ny Titàn miaraka amin'ny induction
Induction Fanaling Nuts